တစ်ဦးကဒိုင်နိုဆောသာ costume, အပန်းဖြေပန်းခြံစီး - သမုဒ္ဒရာအနုပညာ
ခြင်း simulation တိရိစ္ဆာန်
ခြင်း simulation လေ့လာကြရအောင်
Transformers သာ costume
Ltd. , Zigong စီးတီးသမုဒ္ဒရာအနုပညာ Co. ,
(လျှော့သမုဒ္ဒရာအနုပညာအဖြစ်ရည်ညွှန်း), Zigong စီးတီး, စီချွမ်ပြည်နယ်, အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်မှုပန်းခြံတွင်တည်ရှိသည်ဖြစ်သော 2009 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ထိုသို့ဒီဇိုင်း & ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထူးပြုထားတဲ့အနေနဲ့ပေါင်းစပ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်, ထုတ်လုပ်ခြင်း, အရောင်းနှင့်ခံခဲ့ရပါတယ် ခြင်း simulation ထုတ်ကုန်များ၏ပြပွဲ။ သမုဒ္ဒရာအနုပညာ animatronic ဒိုင်နိုဆော, ပုံရိပ်စစ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှား, ဒိုင်နိုဆောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများနှင့်အရိုးစု၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, အတုရှေးခေတ်အပင်များ, သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံတူးဖော်လယ်ပြင်, သေးသေးလေးရှုခင်းများနှင့်ဒိုင်နိုဆောအထည်ချုပ်နှင့်အခြားခြင်း simulation ထုတ်ကုန်လမ်းလျှောက်အာရုံစိုက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့, ကိုယ့်ကိုအဆက်သွယ်ပါ! မေးခြင်း
ဖြစ်ရပ်မှန်စာရင်း display ကို
ရုရှားတွင်ဒိုင်နိုဆောပန်းခြံ, 2016 ဆောင်းရာသီ
2017 Sanya Haitang ဂလားပင်လယ်အော်ဒိုင်နိုဆောအဓိကအကြောင်းအရာအမျိုးသားဥယျာဉ်
ဒိုင်နိုဆောရုရှားတွင်ပန်းခြံ, 2016 နွေရာသီ
Xiamen အတွက် 2017 ဒိုင်နိုဆောအိပ်မက်ပန်းခြံ
Haitang ဂလားပင်လယ်အော်ဒိုင်နိုဆောပန်းခြံအတွင်းပထမဆုံးခြောက်ဆယ်ခြောက်တရုတ်ဒိုင်နိုဆောကြယ်ပွတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဒိုင်နိုဆောသုတေသန၏အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။ 1 မူရင်းကြီးမားသောမော်ဒယ်: ထိုသူအပေါင်းတို့ 1 လမျး၌ပြသလျက်ရှိသည်။ ပန်းခြံအတွင်းရှိကို maded ရာ animatronic ဒိုင်နိုဆောများ၏ခြောက်ဆယ်ခြောက်မျိုးစိတ် installed ပါပြီ။ ဤရွေ့ကားဒိုင်နိုဆောသံမဏိအရိုးစုများနှင့် silica gel ဟာမျက်နှာပြင်၏လုပ်နေကြသည်။ သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ဖွင့်နှင့်အသံစေနှင့်, ပုံရိပ်စစ်အလွန်မြင့်မားသည်နိုင်ပါတယ်။
2016 Summer.Everyone ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံအတွင်းရှိဒိုင်နိုဆောကြည့်ဖို့ချစ်တော်မူ၏။ အထူးသဖြင့်ကလေးတွေအဘို့, သူတို့ animatronic ဒိုင်နိုဆောအကြောင်းကိုအရူးဖြစ်ကြ၏။ လောလောဆယ်ယင်းဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများအများစုကွဲပြားခြားနားသော animatronics တိရိစ္ဆာန်များနှင့်မော်ဒယ်များရှိသည်, အထူးသထက်ပို visitors.And ဒီရုရှားဒိုင်နိုဆောပန်းခြံကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကူညီဒိုင်နိုဆောကိုအကောင်းဆုံးဥပမာပါပဲ။
အကောင်းဆုံးဒိုင်နိုဆောပန်းခြံ Xiamen ဖွင့်လှစ်။ ဒါဟာဒိုင်နိုဆောသိပ္ပံပြတိုက်ကဲ့သို့ရိုးရာဒိုင်နိုဆောပန်းခြံထဲကနေမတူညီတဲ့နှင့်ပိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းဧည့်သည်အများဆုံးပြည့်စုံခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံကိုရရှိသွားတဲ့
နေရပ်လိပ်စာ: No.93, yejiagou, လမ်း lianggaoshan, da '' တစ်ဦးခရိုင်, မြို့ zigong
ဖုန်းနံပါတ်: +86 13281378137
ဖုန်းနံပါတ်: +86 813 5803272
E-mail ကို: postmaster@oadinosaur.com
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. လမ်းညွှန် , Hot ထုတ်ကုန်များ , မြေပုံအညွှန်း , amp မိုဘိုင်း
Mechanical Dinosaur, Chinese New Year Dragon Costume, Walking Ride On Dinosaur, Giant Animatronic Dragon, ဒိုင်နိုဆောရထား , Animatronic Dragon For Sale,